Gaazexeessaan Oromoo Dhabame – Oromedia
Home » Uncategorized » Gaazexeessaan Oromoo Dhabame
(Oromedia, 16 Sadaasa 2016) Gaazexessaan Oromoo, Abdii Gadaa, Sadaasa 9 bara 2016 irraa eegalee achi buuteen isaa akka dhabame ibsame.
Maddeen Oromedia akka ibsanitti, Gaazexeessaa Abdii Gadaa kan dhaabbata TV OBS keessaa hojjataa jiru, Sadaasa 9 bara 2016 ganama hojii deemuuf manaa bahee ture.
“Yeroo sanaa qabee achi buuteen isaa dhabamee jira,” kan jedhan maddeen keenya, torban san keessa humnooti tikaa isa hordofaa akka turan himan.
Guyyaa Abdiin dhabame irraa eegalee maatii fi firoottan isaa baadiyyaa Karrayyuu keessaa gara magaalaa Adaamaa dhufanii bakka hedduu barbaadanis, haga yoonaatti argachuu hin dandeenye.
Namooti hedduun akka shakkanitti Gaazexeessaa Abdii Gadaa humna Agaazii, Oromiyaa goolaa jiruun ukkaamfamuu fi hidhamuun hin oolle.
Gazexeessaa Abdii Gadaa TVO, kan mootummaan Wayyaanee aangoo itti qabu keessa hojjataa ture. Garuu, waggaa lamaan dura achii keessaa ari’amuun dhaaba OBS keessa hojjechaatti jira.
Abdiin ogeessa hojii ogummaa fi seena qabeessa hedduu Oromiyaa keessa naanna’ee hojjachaa jiruu dha.
Marsaan Facebook Abdii Gadaa yeroo dhumaaf kan haaromfame Onkoloolessa 31 saatii 9:27pm irratti ta’uu agarsiisa.
Previous: Ethiopia charges 22 over terror plot after ‘receiving instructions from Oromo Liberation Front’
Next: Guyyaan Yaadannoo FDG wagga 11ffaa Adelaide keessatti kabajame